Ciidanka Kenya oo 4-ruux ka qafaashay Gobolka Gedo! - – Axadle
Ciidanka Kenya oo 4-ruux ka qafaashay Gobolka Gedo! –
Ciidanka gaarka ah ee Kenya u qaabilsan la dagaalanka waxa loogu yeero Argagixisada loona soo gaabiyo (GSU) ayaa tuulada Daarusalaam Degmada Ceelwaaq ka qafaashay 4-ruux oo dadka tuuladaas ah.
Ehelka dadka maqan ayaa xaqiijiyay in Askataan sida gaarka ah Kenya u qaabilsan la dagaalanka Argagixisada in ay wateen afar oo kala ah: Cabdifitaax Xasan Nuur, Cabdifitaax Diiriye Qorane, Cabdullaahi Cali Dhicis iyo Maxamed Ibraahim Afey.
Dadkaan waa xoolo dhaqato sida ay shaaciyeen ehelkooda, waxaana u yimid Ciidamada Kenya oo ka kaxeystay tuulada ay joogeen oo hoostagta Degmada Ceelwaaq ee Gobolka Gedo, lamana ogo halka ay geysteen.
Saraakiisha GSU-da inta badan Warbaahinta lama hadlaan, sooma bandhigaan shaqsiyaadka ay xiraan, balse qoraalo ay dhigaan barahooda Xiriirka Bulshada ayay ku sheegaan in shaqsiyaadka ay qabtaan katirsan yihiin waxa loogu yeero Argagixisada.
Tuulo hoostagta Degmada Ceelwaaq ee Gobolka Gedo waxaa ay Askarta Kenya ku dileen dad shacab ah oo kacdoon ka dhashay uu sababay isku dhac dhexmaray Ciidamada KDF-ta iyo kuwa DFS.
Marar kala duwan ayay qaraxyo ku xireen Ciidankaan Gaarka ah ee Kenya Anteenooyin Shirkado Isgaarsiin deegaannada & Tuulooyinka Gobolka Gedo iyo Jubbooyinka dhanka Kenya xiga.
Ilaa haatan DG Jubbaland kama aysan hadlin Falkii dilka ahaa, dibadbaxa shacabka, isku dhaca Ciidamada DFS iyo Kenya, howlgalka Askarta Kenyanka ah ee Gobolka Gedo iyo qafaalka dadka.
Hogaamiyaha Jubbaland oo xiriir wanaagsan la leh Kenya ayaa dhowr jeer dalbaday in Ciidamada DFS laga saaro Gobolka Gedo, si Askarta Daraawiishta Dowlad Goboleedka loo geeyo, maadaama Colaadda loo qaaday heshiis siyaasadeed laga gaaray.
Barcelona vs Villarreal – Koeman Oo Kulankii 1aad